छोरालाई कोरोनापछि बावु : यो तस्वीरले दुनियाँ स्त’ब्ध [भिडियोसहित] सेयर गर्नुहोस !! - Mitho Khabar
छोरालाई कोरोनापछि बावु : यो तस्वीरले दुनियाँ स्त’ब्ध [भिडियोसहित] सेयर गर्नुहोस !!
April 18, 2020 mithokhabarLeaveaComment on छोरालाई कोरोनापछि बावु : यो तस्वीरले दुनियाँ स्त’ब्ध [भिडियोसहित] सेयर गर्नुहोस !!
काठमाडौ । तस्वीरले जो कोहिलाई पनि स्त’ब्ध बनाउछ । अहिले दुनियाँ नै स्त’ब्ध बनेको छ । यसैले मायाको प्रतिक भन्दै यो तस्वीर सेयर भइरहेको छ । तस्वीर हो फिलिपिन्सको एउटा गाउँको । जहाँ एक परिवारमा आफ्नो सानो छोरालाई कोरोना भाइरस देखा परेपछी अस्पतालको आईसोलेशनमा बसेर जीवन रक्षाको सङ्घर्ष गरिरहेका छन । तर बुबाको माया त हो आफ्नो बिरामी छोरा भेट्न । अस्पताल गएर छोरालाई प्लाष्टिक बेरेर भए पनि आफ्नो सन्तानलाई अंगाल्नु भएको छ। आँखा रसाउछ दृश्यले यसैले यस्तो घटना हामी नेपालीहरुमा पनि देखिन्न भन्न सकिदैन । यसैले गर्दा बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सरकारले लगाएको नियम र लकडाउनको आदेश पुरा पालना गरि आफू पनि सुरक्षित बनौं ।
२, म छट्टै वाथरूम र शौचालयको प्रयोग गर्नेछु र यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरूम र शौचालय आफै हरेक पटक सफा गर्नेछु ।
६, म नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन र पानीले मिची मिची २० सेकेन्डसम्म धुनेछु वा हात सफा राख्न अ ल्कोह लयुक्त हेन्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेछु । म हात नधोइ मेरा आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिनेछु ।
७, मैले प्रयोग गर्ने गिलास, कप, खाना खान प्रयोग हुने भाडा, तौलीया रुमाल,ओछ्यान वा अन्य सामानहरू घरका अन्य व्यक्तिहरूसँग साझा प्रयोग गर्दिन । प्रयोग गरेपछि यी सामानहरू म साबुन र पानीले सफासँग धुनेछु । ८, म अन्य व्यक्तिहरूसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने छैन ।
९। यदि अन्य व्यक्तिहरूसंगको सम्पर्कमा आउनु पर्दा म कम्तिमा १ मिटर (३ फिट) को दुरी राख्नेछु र म अर्को व्यक्तिसँग एउटै कोठामा हुँदा र स्वास्थ्य संस्था जाँदा मास्क लगाउनेछु ।
चीनमा कोरोनाको क्वारेन्टाइन बनाइएको भवन भत्कियो
तरुण दलले कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको खबरदारी गर्ने